Gabar ka mid aheyd Shaqaalaha Baarlamaanka oo Kooxo Hubeysan Ku dilay Degmada Wadajir – STAR FM SOMALIA
Kooxo hubeysan ayaa maanta barqadii ku dilay degmada Wadajir haweeney ka mid aheyd shaqaalaha Baarlamaanka oo lagu magacaabayay Raxmo Maxamed C/qaadir.
Goob-joogayaal ayaa ah sheegay in labo dhalinyaro bastoolado ku hubeysan ayaa toogtay gabadhan meel ku dhow hoygeeda, xilli ay ku sii jeeday xarunta Baarlamaanka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in kooxihii ka dambeeyay dilka ayaa ka baxsaday goobta, waxaana mar dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaasoo aanay ku guuleysan inay soo qabtaan kooxihii dilka ka dambeeyay.
Dilalka qorsheysan ee loo geysanayay shaqaalaha dowladda ayaa ahaa kuwo ka dhacayay magaalada Muqdisho, iyadoo dhowaan degmada Dharkeenley lagu dilay howl wadeen ka tirsanaa Xafiirka Ra’iisul Wasaaraha.
Degmooyinka deriska ah ee Wadajir iyo Dharkeenley ayaa waxaa horay uga dhacay dilal kala duwan oo loo geystay xildhibaano, askar iyo kuwa kale.